Roseann Quinn ၏လူသတ်မှု
'' မစ္စတာ Goodbar ရှာဖွေနေ '' နောက်ကွယ်မှာအဆိုပါရီးရဲလ်ပုံပြင်
Roseann Quinn ရက်စက်စွာသူမကတစ်ဦးရပ်ကွက်အတွင်းဘားမှာတွေ့ခဲ့တဲ့လူတယောက်သည်အားဖြင့်သူမ၏တိုက်ခန်းတွင်အသတ်ခံခဲ့သူတစ်ဦး 28 နှစ်အရွယ်ကျောင်းကဆရာမဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမ၏လူသတ်မှု "Mr.Goodbar ရှာဖွေနေ။ " ရုပ်ရှင် hit သတိပေးခံရ
Roseann Quinn အိုငျးရစျအမေရိကန်နှစ်ဦးစလုံး, 1944. သူမ၏မိဘများမွေးဖွားခဲ့သည်, Quinn အသက်အရွယ် 13 မှာ 11 တုန်းကသူမပိုလီယိုရောဂါနှင့်ဆေးရုံတက်တစ်နှစ်ကုန်ဆုံးခဲ့ Bronx နယူးယောက်ကနေမိုင်းဟေးလ်မြို့နယ်မှနယူးဂျာစီပြည်နယ်မိသားစုပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
Quinn ရဲ့မိဘနှစ်ဦးစလုံးဘုရားကိုကိုးကွယ်သောကက်သလစ်တို့ကဲ့သို့သောသူတို့သားသမီးကြီးပြင်း။ 1962 ခုနှစ်မှာ Quinn Denville, နယူးဂျာစီပြည်နယ်အတွင်းရှိမောရစ်ကက်သလစ် High School တွင်ထံမှဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ အားလုံးပွဲ by သူမကသူမ၏အတန်းဖော်များနှင့်အတူကောင်းစွာလျှောက်တွင်ရဖို့သလိုပဲ။ သူမ၏စာအုပ်အတွင်းတစ်ဦးကသင်္ကေတ "ကိုသိရန် ... ကောင်းတဲ့တွေ့ဆုံရန်လွယ်ကူ။ " အဖြစ်သူမ၏ဖော်ပြထား
1966 ခုနှစ်တွင် Quinn ဟာ Newark ပြည်နယ်ဆရာများကောလိပ်ကနေဘွဲ့ရသူ Bronx အတွက်နားမကြားဘို့စိန့်ဂျိုးဇက်၏ School တွင်ဆုံးမဩဝါဒပေးစတင်ခဲ့သည်။ သူမသည်ကောင်းစွာသူမ၏ကျောင်းသားများအနေဖြင့်ကြိုက်နှစ်သက်သူတစ်ဦးဆက်ကပ်အပ်နှံထားဆရာဖြစ်ခဲ့သည်။
အစောပိုင်း 1970 ခုနှစ်တွင်အမျိုးသမီး၏လှုပ်ရှားမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတော်လှန်ရေးကိုင်ရန်စတင်ခဲ့သည်။ Quinn ကပ်ကာလ၏မြင်ကွင်းကိုပိုပြီးလစ်ဘရယ်အချက်များကိုအချို့မွေးစား, သူ့ရွယ်တူချင်းအချို့နှင့်မတူဘဲသူမကအမျိုးမျိုးသောနောက်ခံနဲ့အသက်မွေးဝမ်းထဲကနေလူမျိုးရေးအရကွဲပြားခြားနားမိတ်ဆွေစက်ဝိုင်းနှင့်အတူမိမိကိုယ်ကိုဝိုင်းရံ။ သူမသည်တစ်ဦးလွယ်ကူသောအပြုံးနှင့်တစ်ဦးဖွင့်လှစ်ခဲ့သောသဘောထားနှင့်အတူတစ်ဦးဆွဲဆောင်မှုအမြိုးသမီးတဖြစ်ခဲ့သည်။
1972 ခုနှစ်တွင်သူမအနောက်ဘက်မှာသေးငယ်တဲ့စတူဒီယိုတိုက်ခန်းငှားရမ်းနယူးယောက်စီးတီးသို့မိမိကိုယ်ကိုအားဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ တစ်ဦးတည်းနေထိုင်နေကြလွတ်လပ်ရေးသူမ၏အလိုဆန္ဒအာဟာရပုံနှင့်သူမမကြာခဏအလုပ်အပြီးတစ်ဦးတည်းအရက်ဆိုင်ကိုသွားလိမ့်မယ်။ စပျစ်ရည်ကိုရင်းနေချိန်မှာရှိပါတယ်သူမကတစ်ခါတစ်ရံစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဖတ်လိမ့်မယ်။ အခြားအကြိမ်သူမယောက်ျားနှင့်တွေ့ဆုံရန်နှင့်ညဉ့်အဘို့အပြန်သူမ၏တိုက်ခန်းမှသူတို့ကိုဖိတ်ခေါ်လိမ့်မယ်။
အိမျနီးခငျြးနိုငျငံအကြာတွင်မျှမျှတတမှန်မှန် Quinn သူမ၏တိုက်ခန်းတွင်ယောက်ျားနှင့်အတူတိုက်ပွဲကိုကြားနိုင်ကြောင်းပြောလိမ့်မယ်။ အနည်းဆုံးအခါသမယတွင်တိုက်ပွဲများရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှညျ့ Quinn နာကျင်နှင့်နင်းနယ်လျက်ရှိသောထားခဲ့တယ်။
သူမအများကြီးအခါသမယအပေါ်ရှိခဲ့ပါတယ်အဖြစ်ဇန်နဝါရီလ 1, 1973 တွင်, Quinn, သူမက WM အေဘယ်တွိလို့ချေါတဲ့ရပ်ကွက်အတွင်းဘားနေထိုင်ခဲ့ရှိရာကနေလမ်းတစ်လျှောက်သွား၏။ အဲဒီမှာနေချိန်မှာသူမကအမျိုးသားနှစ်ဦး, ဒန်နီ Murray နဲ့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတစ်ယောဟနျသဝိန်း Wilson ကအမည်ရှိတစတော့ရှယ်ယာပွဲစားတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ Murray နဲ့ပြောချင်နီးပါးတစ်နှစ်အတူတကွနေထိုင်ခဲ့ကြသောလိင်တူချစ်သူချစ်သူများဖြစ်ကြသည်။
Murray 11 နာရီဝန်းကျင်ဘား left နှင့် Quinn နှင့် Wilson ကသောက်ရနှင့်ညဉ့်သို့နှောင်းပိုင်းကစကားပြောဆက်ပြောသည်။2နံနက်န်းကျင်သူတို့အေဘယ်တွိ left နှင့် Quinn ရဲ့တိုက်ခန်းသို့သွားကြ၏။
သုံးရက်အကြာတွင် Quinn တိုက်ခန်းအတွင်း၌သေလွန်သောသူတို့သည်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ သူမသည်သူ့ကိုယ်သူ၏သတ္တုတွေဆီကနေနှင့်အတူဦးခေါင်းကျော်ရိုက်နှက်အဓမ္မပြုကျင့်အနည်းဆုံး 14 ကြိမ်ထိုးနှင့်သူမ၏လိင်အင်္ဂါသို့ဖြည့်စွက်တဲ့ဖယောင်းတိုင်ခဲ့ခံခဲ့ရသည်။ သူမ၏တိုက်ခန်းလုယှက်ခံခဲ့ရခြင်းနှင့်နံရံအသွေးနှင့် splattered ခဲ့ကြသည်။
နယူးယောက်မြို့မှတဆင့်ပျံ့နှံ့သည့် grisly လူသတ်မှု၏သတင်းကိုမကြာခဏသူမ၏ "နှစ်ဆဘဝ" အဖြစ်စာဖြင့်ရေးသား Quinn ရဲ့အသက်တာ၏မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့မကြာမီအသေးစိတ်ရှေ့စာမျက်နှာသတင်းဖြစ်လာခဲ့သည်။
အပေါ်သွားကြဖို့အနည်းငယ်သဲလွန်စခဲ့သူအတောအတွင်းစုံထောက်, ခုနှစ်, သတင်းစာများမှဒန်နီ Murray ရဲ့တစ်ဦးပုံကြမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အဆိုပါပုံကြမ်းကိုမြင်ပြီးနောက် Murray ရှေ့နေဆက်သွယ်မေးမြန်းရာနှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်လည်းတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ သူဟာ Wilson ကသူတို့ရဲ့တိုက်ခန်းမှပြန်လာသောနှင့်လူသတ်မှုမှဝန်ခံခဲ့ကြောင်းအပါအဝင်သိတယ်အဘယ်အရာကိုသူတို့ကိုသို့ပြောသည်။ သူကအင်ဒီယားနားမှာရှိတဲ့သူ့အစ်ကို၏အိမ်သို့သွားနိုင်ဒါ Murray ငွေနှင့် Wilson ကထောက်ပံ့။
ယောဟနျသဝိန်း Wilson က
ဇန်နဝါရီလ 11, 1973 တွင်ရဲက Roseann Quinn ရဲ့လူသတ်မှုများအတွက် Wilson ကဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ယင်းနောက် Wilson ကယ့်အသေအချာမသိအတိတ်၏အသေးစိတျထင်ရှားခဲ့သည်။
ယောဟနျသဝိန်း Wilson ကမိမိအဖမ်းဆီးခံရသည့်အချိန်တွင် 23 ခဲ့သည်။ မူလကအင်ဒီယားနား, နယူးယောက်စီးတီးမှမသွားမီဖလော်ရီဒါမှပြောင်းရွှေ့နှစ်ခုမိန်းကလေးငယ်များ၏ကွာရှင်းအဘ၏လက်မှ။
သူကခိုးယူခြင်းစွဲချက်အပေါ်တွင် Kansas City, Missouri မှာထပ်မတရားစွာကျင့်ကြံပြုမူဘို့ Daytona သဲသောင်ပြင်, ဖလော်ရီဒါအတွက်ထောင်ဒဏ်အချိန်တာဝန်ထမ်းဆောင်နှင့်ဘဲလျက်တစ်ရှည်ဖမ်းဆီးစံချိန်ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဇူလိုင်လ 1972 ခုနှစ်တွင်သူသည်မိုင်ယာမီထောင်ကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သူတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး Murray နဲ့ပြောင်းရွှေ့ခင်အထိသူတစ်ဦးလမ်းပေါ် hustler အဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ဘယ်မှာနယူးယောက်မြို့ကဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ Wilson ကမြောက်မြားစွာကြိမ်အဖမ်းခံခဲ့ရပြီးခဲ့ပေမယ့်ဘာမှသူဟာအကြမ်းဖက်များနှင့်အန္တရာယ်များတဲ့သူဖွစျသညျကိုညွှန်ပြကြောင်း, မိမိအတိတ်တွင်ရှိခဲ့သည်။
Wilson ကနောက်ပိုင်းတွင်အမှုနှင့် ပတ်သက်. အပြည့်အဝကြေညာချက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သူဟာ Quinn ဦးသေဆုံးပြီးနှင့်သူမ၏တိုက်ခန်းသွားပြီးနောက်သူတို့အချို့အိုးသောက်သည်သောသူသည်ညဉ့်ကိုသောက်ခဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့သို့ပြောကြားခဲ့သည်။ သူကဒေါသထှကျလာပွီးသူမလိင်ဖျော်ဖြေနိုင်ဖြစ်ခြင်းမသူ့ကိုပျော်စရာလုပ်ပြီးနောက်သူမ၏သေဆုံးခဲ့ရသည်။
မိမိအဖမ်းဆီး Wilson ကအပြီးလေးလအိပ်ရာစာရွက်များနဲ့သူ့ရဲ့ဆဲလ်မိမိကိုမိမိဆွဲထားသဖြင့်သတ်သေ။
အဆိုပါ Quinn လူသတ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်း, ရဲမကြာခဏက Quinn ရဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့လူသတ်သူ့ကိုယ်သူထက်သူမ၏လူသတ်မှုများအတွက်အပြစ်တင်ဖို့ပိုခဲ့ပေါ်လာဖွဲ့သောလမ်းအတွက်ကိုးကားခဲ့သည်။ အမျိုးသမီး၏လှုပ်ရှားမှုကနေတစ်ဦးကအကာအကွယ်စကားသံကိုသူမလိုချင်သည့်လမ်းအသက်ရှင်ရန်သူမ၏ညာဘက်တက်သည်စကားပြော, သူ့ကိုယ်သူခုခံကာကွယ်လို့မရဘူး, နှင့်သားကောင်အဖြစ်မဟုတ်, အဘယ်သူ၏လုပ်ရပ်များသူမ၏ထိုးခံရဖို့ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ temptress အဖြစ်သူမ၏စောင့်ရှောက်ဖို့သူကို Quinn န်းကျင်ခွေပုံ သေရိုက်နှက်။
ဒါကြောင့်အချိန်နည်းနည်းသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပေမယ့်မီဒီယာ Quinn ရဲ့လူသတ်မှုနှင့်အခြားမိန်းမတို့သည်ထိုကာလအတွင်းမှာအသတ်ခံတင်ပြဘယ်လိုတိုင်ကြားမှုများအပေါ်, သတင်းအေဂျင်စီများအမျိုးသမီးလူသတ်မှုသားကောင်များအကြောင်းကိုရေးသားခဲ့သည်ဘယ်လိုဂုဏ်သရေရှိအချို့အပြောင်းအလဲသြဇာလွှမ်းမိုးမှု။
မစ္စတာ Goodbar ရှာဖွေနေ
နယူးယောက်စီးတီးရှိအတော်များများက Roseann Quinn ရဲ့လူသတ်မှုအားဖြင့်သရဲခြောက်တယ်လို့ခံနေရနှင့် 1975 ခုနှစ်တွင်စာရေးဆရာ Judith Rossner Quinn ရဲ့ဘဝနှင့်သူမအသတ်ခံခဲ့လမ်းထင်ဟပ်သောရောင်းအားအကောင်းဆုံးဝတ္ထု, "မစ္စတာ Goodbar ရှာဖွေနေ" ဟုရေးသားခဲ့သည်။
မိန်းမအားတစ်ဦးသတိပေးပုံပြင်အဖြစ်ဖော်ပြ, စာအုပ်တစ်ဦးကိုအကောင်းဆုံးရောင်းချသူဖြစ်လာခဲ့သည်။ 1977 ခုနှစ်တွင်ကသားကောင်အဖြစ် Diane Keaton သရုပ်ဆောင်ရုပ်ရှင်သို့ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။
အဆိုပါဂျနီဖာ Hudson မိသားစုလူသတ်မှု
ပရိုဖိုင်းကိုနှင့် Teresa Lewis က၏ပြစ်မှု
အဆိုပါ Killer လင်မယား Karla Homolka နှင့်ပေါလု Bernardo ၏ပြစ်မှု
ဘရိုင်ယန်သည်ဒါဝိဒ် Mitchell က၏ပရိုဖိုင်းနှင့်ဧလိရှဗက်စမတ်၏ပြန်ပေးဆွဲ
Julissa Brisman: အ Craigslist Killer ၏နှိပ်စက်ခံရသူ
Ex-Manson မိသားစုအဖွဲ့ဝင်လင်ဒါ Kasabian ၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို
ရောဘတ်လေး Stern ပာ, အစဉ်အလာမော်ဒန်နှင့်ဂန္ထဝင်
Omaha-အဆင့်လက်ခံရေးမှာ Nebraska တက္ကသိုလ်
ဓာတုဗေဒအတွက် Element ကိုဆိုတာဘာလဲ အဓိပ္ပာယ်နှင့်ဥပမာများ
ရေးစပ်သီကုံးအတွက် Spatial အမိန့်
သင့်ယောဘသည်အကြောင်း Talking - စီးပွားရေးအင်္ဂလိပ် Dialogue
မွတ်စ်လင်ဿွာန်စဉ်အတွင်းလွတ်သွားသောအစာရှောင်ခြင်းနေ့ရက်များများအတွက် Up ကို Make နိုင်သလား?
အဆိုပါစတုတ္ထအိမ် (The Moon)
သင့်ရဲ့စာသင်ခန်း Decorating? သတိပေးချက်: ကျောင်းသားများ Overstimulate မနေပါနဲ့!
အလယျပိုငျးအင်ဂရိတ်ဒအကောင်းဆုံး Narrative သုတစာပေစာအုပ်များ
အဆီဆုံးရှုံးမှု vs. အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုအကြားခြားနားချက်
အဆိုပါ Pros များနှင့်မြက်တင်းနစ်တရားရုံးများ၏ Cons
Matrimonium - ရောမအိမ်ထောင်ရေး
Odile Decq ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
ချရန်အားဖြင့် Agricola ၏ဘာသာပြန်စာပေ